Furayaasha ugufiican Cuba | Wararka Safarka
Furayaasha ugu fiican Cuba
Mariela Carril | | Cuba, Xeebaha
Ma waxaad ka daashay qabowga oo kaliya ka fikir xagaaga? Xagaagu waa isku mid xeebta iyo badda dad badana ma qiyaasi karaan xilliga xagaaga oo aan maalmo kooban laga joogin xeebta. Yurub waxay leedahay xeebo fiican Spainna waa qurux badan tahay, laakiin ma jiraan wax la mid ah muuqaalka kulaylaha ee Badda Kariibiyaanka.
Kariibiyaanka waxaa jira meelo badan oo suurtagal ah, jasiirado badan ayaa dhaqaalahooda u leexiyay xagga dalxiiska caalamiga ah, laakiin waxaa jira mid kaliya oo leh dalab ballaaran oo dhul-kulayleed leh, taariikh iyo dhaqan dhaqameed weyn: Cuba. Tan iyo burburkii Midowgii Soofiyeeti, jasiiraddu waxay heshay dalxiis waxayna leedahay hoteello iyo goobo lagu nasto meel kasta, laakiin furayaasha Cuba waa janno run ah sidaas darteed maanta waan daryeeli doonnaa furayaasha ugu fiican Cuba si aad ugu raaxaysato xagaaga.
1 Furayaasha Jardines del Rey
2 Koonfur Key Largo
Furayaasha Jardines del Rey
Furayaashu waa wax aan ka badnayn jasiirado iyo jasiirado ku yaal xeebta Atlantic iyo xeebta Kariibiyaanka ee Cuba. Xagga sare iyo ka hoose, haddii aad aragto khariidad. Kuwa waxay ka sarreeyaan badda atlantic Waxay ku baabtiisteen gumeystayaashu bilowgii qarnigii XNUMX-aad iyagoo wata magaca Jardines del Rey, sharafta Fernando ee Katooliga. Bal qiyaas jannada ay tahay in badmaaxayaashu arkeen! Jasiiraddani waxay ka mid tahay afarta ku xeeran jasiiradda ugu weyn uguna badan.
Jardiinooyinka Boqorka waxay ku yaalliin woqooyiga iyo Cayo Coco, Cayo Sabinal, Cayo Santa María, Cayo Romano, Cayo Guajaba iyo Cayo Guillermo. Kuwa ugu dalxiis badan waa Guillermo, Coco iyo Santa María. Furayaashan, masaafada u dhaxaysa iyaga iyo Havana awgeed waa xulashooyinka ugu jaban.
Gaius William: waxay leedahay bed dhan 13 kiiloomitir oo laba jibbaaran oo ay jiraan afar goobood oo loo dhan yahay. Waxay leedahay garoon diyaaradeed oo yar iyo sidoo kale marina waxayna kuxirantahay jasiiradda weyn webi xeebeed oo isku xidha gobolka Ciego de Ávila. Tani oo u dhow xadka labaad ee ugu weyn adduunka, waxaa jira flamingos casaan ah waxayna leedahay mid ka mid ah xeerarka ugu fiican ee loo tixgeliyo Cuba, Xeebta Pilar iyadoo lagu sharfayo markabkii Hemingway ee halkan mari jiray.
Cayo Santa Maria: waxay kuxirantahay jasiiradda weyn isla dhererka dhererkeedu waa 48-kilomitir waxayna leedahay shan xarumood oo hoteel ah iyo kuwo dheer xeebaha cad cad oo fidiya 10 kiiloomitir. Waxaa loo yaqaanaa "Geedka Cad ee Beerta Boqorka" waana kan ugu weyn koox-hoosaadyo furayaal ah oo magaciisu yahay Cayos de la Herradura (Santa María, Las Brujas iyo Ensenachos). Afar ka mid ah hoteelada ayaa iska leh Sol Meliá halka kan kalena uu leeyahay silsiladda Barceló. Waxaa jira shan xiddigood iyo afar xiddigood.
Cayo Coco: Waxay leedahay dusha sare 370 kilomitir iyo dhammaan hudheelada loo dhan yahay. Waxa kale oo ku xidhan qarka qayb ka mid ah xeebta oo si isdaba joog ah ugu xirmaya furayaasha iyo in xilligaas la isku khilaafsanaa saamaynta deegaanka ee ay ku yeelan karto. Waddo dabiici ah ayaa ku xireysa markeeda Cayo Guillermo, markaa labadaba lug baa lagu booqan karaa. Waxay leedahay garoon diyaaradeed oo caalami ah marka lagu daro hudheelada iyo xeebaha cad waxaa jira tobanaan flamingos duurjoogta ah si looga fiirsado.
Kor ayaan ku iri taa Iyagu waa xulashooyinka ugu jaban maxaa yeelay aad ugama foga Havana iyo baakadaha dalxiis ee ugu caansan had iyo jeer waxaa ku jira dhowr maalmood caasimadda Cuba iyo inta hartay mid ka mid ah furayaashan. Diyaarad yar oo duulimaad ah oo aad horeyba ugu jirto mid ka mid ah aagaggan. Kaladuwan waa kiiska furaha xiga, Cayo Largo del Sur.
Koonfur Key Largo
Tani waa, aniga ahaan, fure ugu fiican dhamaan. Goobtu waa mid heer sare ah maadaama aysan dhinaca Atlantic ahayn laakiin waxay dul taal badda Kariibiyaanka, hal dhinac dhamaadka jasiiradaha Canarreos. Waxay leedahay aag ku wareegsan 37 kiiloomitir oo laba jibbaar ah iyo 24 kilomitir oo dherer ah. Waxay ku hareeraysan tahay maraakiibta dhuxusha ah oo ay ku nool yihiin dhir qurux badan iyo kalluun kala duwan. Waxay u dhowdahay xeeb weyn oo dul sabaynaysa biyaha diirran iyo turquoise ee badda.
Waxay leedahay a Madaarka caalamiga in ay ku shaqeyn karto diyaarado waawayn sidaasna diyaarado toos ah uga yimaadaan Montreal, Toronto, Milan ama Frankfurt, tusaale ahaan. Waxaa sidoo kale jira duulimaadyada maalin kasta ee ka imanaya ama ka tagaya Havana martida hudheelkuna waxay abaabuli karaan safarro magaalooyin muhiim ah laga soo bilaabo aragtida taariikhiga iyo dhaqanka sida Santiago de Cuba, Trinidad, Cienfuegos, Varadero ama Pinar del Río. Mana u baahna marina sidaa darteed qof kasta oo adeegsada doon shiraac sidoo kale wuu gaari karaa furaha.
Waxay leedahay toddobo xarumood oo hudheel ah oo u dhexeeya laba illaa afar xiddigood qaybta. Waxay kala yihiin Barceló, Sol Meliá iyo Gran Caribe: hudheelada 4-xiddigle Sol Cayo Largo, 4-xiddig Gran Caribe Playa Blanca, Hotel Sol, Isla del Sur, iyo wixii la mid ah. Si aad ugu wareejiso furaha waxaa jira taksi waana awoodaa kireysato gaari ama jiif ama u soo guur minibus koox. Waxa kale oo jira a tareen yar taas oo rarta martida hudheelka una qaadda kana soo qaadda xeebaha Paraíso iyo Sirena.
Xeebaha ugu fiican Cayo Largo uu Lindamar, shan kiiloomitir cad sida bur, oo ku yaal koonfurta furaha oo aad ugu dhow aagga hudheelka, the xeebta mermaid, dhanka galbeed, oo leh marwalba ciideeda cusub si aadan u gubin, Xeebta Los Cocos, oo leh geedo qumbaha qurux badan oo bixiya hooska iyo Xeebta Jannada, sida ugufiican ee loo helo asturnaan. Kuwani, marka lagu daro inay yihiin xeebaha ugu fiican, sidoo kale waa kuwa ugu fudud ee la heli karo. Cayo Largo waxaa ku yaal xeebo kale oo aan la aqoon, xeebaha bikradaha ah, laakiin halkaas awalba waa inaad kireysataa gaari maxaa yeelay gaadiidka dalxiiska ma yimaado.
Tusaale ahaan? Ku Xeebta Tortuga, Xeebta Blanca ama Xeebta Punta Mal Tiempo. Los Cocos sidoo kale way ku dari kartaa liiskan xulashada. In kasta oo ay roobab badan da'ayaan inta u dhexeysa May iyo Oktoobar maxaa yeelay waa xagaa oo waa kuleyl, sidaa darteed qofku weli wuu ku raaxeysan karaa. Ma jiro gaadiid badeed u socda Cayo LargoTaasi waa, haddii aadan jeclayn inaad duusho, ma gaari kartid xeebta jasiiradda weyn oo doon halkaas kama aad kartid. Diyaaradda ama diyaaraddu waa habka gaadiidka oo maaddaama masaafada Havana ka weyn tahay, socodku waa qaali oo dalxiisayaal badan ayaa aakhirka doorta mid ka mid ah furayaashii ugu horreeyay ee aan kugu magacaabay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Cuba » Furayaasha ugu fiican Cuba
Jasiiradaha iyo Xeebaha Kambodiya: Kep, Koh Tonsay iyo Sihanoukville
Afarta Magaalo ee quruxda badan ee Veracruz iyo Sonora